WW2: မဟာဗျူဟာတပ်မှူး (WW2: Strategy Commander) - 2Game
WW2: မဟာဗျူဟာတပ်မှူး (WW2: Strategy Commander)
▪ Author: JOYNOWSTUDIO
▪ Publish date: 29/04/2018
အလှည့်-based စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူဂန္စစ်ရေး wargame,! တစ်ဦး WW2 စစ်ဆင်ရေးတပ်မှူးအဖြစ် Play, စခန်းရွေးချယ် WW2 ၏လူ့သမိုငျးလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုနာမည်ကျော်တိုက်ပွဲများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါ!
နည်းဗျူဟာမျိုးကိုသုံးပြီး, ကျူးကျော်ခုခံကာကွယ်အပေါ်ရန်သူခေါင်းကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်, စစ်တိုက် command ကိုတစ်စီးရီးမှတဆင့်နောက်ဆုံးအောင်ပွဲရန်သင့်စစ်တပ်ဦးဆောင်လမ်းပြ!
【ခြင်း simulation & မဟာဗျူဟာ】
ဒါဟာ sandbox ‘Simulator ကို, turn-based နည်းဗျူဟာများနှင့်စစ်ရေးနည်းဗျူဟာဂိမ်း၏ပြီးပြည့်စုံပေါင်းစပ်ပါပဲ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် themes များ၏ Omni-directional display ကို။ ~ 1945 1939 အတွက်ရီးရဲလ်ကမ္ဘာကြီးပဋိပက္ခ Restore နှင့်သင်တို့အဘို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ပွဲ၏ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးပွား။
ပြောက်ကျားလှုပ်ရှားမှုများ, ဆင်းသက်စစ်ဆင်ရေးများနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းတူသောကျပန်းဖြစ်ရပ်များအဆုံးမဲ့ replayability နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်း session ရဲ့ထူးခြားမှုသေချာပါလိမ့်မယ်။
【စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ layout ကို Build 】
Cavalry, ခြေလျင်, ရေတပ်, သံချပ်ကာအမြောက်, တင့်ကား, အနုမြူလက်နက်များ, လေယာဉ်တင်သင်္ဘော, မော်တော်ယာဉ်များ, ရေငုပ်သင်္ဘော, တိုက်, မိုးသည်းထန်စွာ Cruiser, ဖျက်သင်္ဘော …… ဒါပေါ်တွင် WW2 ၌ထငျရှား: အစွမ်းထက်စွမ်းအားလက်နက်သည်။
နေ့စဉ်တိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံရဖို့။ သင့်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးထွားသို့မဟုတ်သိမ်းပိုက်နယ်မြေများထံမှအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. R & D ကိုမြှင့်တင်ရန်။ တိုက်ခိုက်ရေးယူနစ်၏အမျိုးမျိုးသောပိုမိုရှုပ်ထွေးစစ်မြေပြင်အခွအေနေပေးပါ!
Turn-based စစ်တုရင်ကစားပွဲကပိုသည်းခံခြင်းနှင့်နည်းဗျူဟာလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျထိုးစစ်သို့မဟုတ်ခုခံကာကွယ်တစ်ဦးချင်းစီအလှည့်, အတွင်းလက်မောင်းစီစဉ်ဖို့လိုပါတယ်။
【 Tactics နှင့် collocations 】
30+ သမိုင်းဆိုင်ရာကမ်ပိန်း: တစ်ဝက်တစ်ပျက်၏စစ်တိုက်, stalingrad ၏စစ်တိုက် …
7 ပင်မ Battlefield: အာရှ, အာဖရိက, ဥရောပ …
2 စစ်ဆင်ရေးပဋိပက္ခစခန်းများမှ: မဟာမိတ်များအဖွဲ့ခွဲ (အမေရိကန်, ဗြိတိန်, ရုရှားနိုင်ငံ, တရုတ်) နှင့် Axies အဖွဲ့ခွဲ (ဂျာမနီ, အီတလီ, ဂျပန်)
9+ ကြီးမားသော battlefiled မြေပုံ 1st ဗားရှင်းများကိုနေကြတယ်
Omni-directional တိုက်ခိုက်ရေးအာကာသ: ရေတပ်စစ်တိုက်, လေတိုက်ခိုက်ရေး, မြေယာစစ်တိုက်။
ရဖို့ငှါးနှင့်သင့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ adventege ယူ … ကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်တော်နှင့်ကွန်မြူနစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့၏စတာလင်, ဒါကြောင့်အပေါ် Churchill ၏, de Gaulle … ဂျာမနီ, အီတလီ, နှင့်တူသောအခြားအ header ကိုများကဲ့သို့အထူးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပြည်နယ်၏ကျော်ကြားသမိုင်းဆိုင်ရာဦးခေါင်းသည် အောင်ပွဲ။
【 Sandbox & Simulator 】
မြေပုံစနစ်ကလုံးဝချောမွေ့စွာချဲ့ခြင်းထောက်ခံပါတယ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလူမြိုး၏ပိုင်နက်များနှင့်နယ်နိမိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသောဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူများရိုက်ပုတ်နည်းဗျူဟာသုံးပြီးအပြင်, သငျသညျလညျး, စျေးဆိုင်များတွင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုငှားရမ်းနှင့်သင့် own.And ၏ကြည်းတပ်တည်ဆောက်တိုင်းစစ်တပ်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြား features တွေရှိပါတယ်, ထိထိရောက်ရောက်သူတို့ကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ဘယျသူမှမအောငျရှိနိုင်ပါသည်။
ပွင့်လင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲပြီးအောင်နှင့်ပိုပြီးကျော်ကြားစစ်မြေပြင်လေ့လာစူးစမ်း။ တိုင်းတပ်မတော်စစ်တိုက်အတွေ့အကြုံအားရရှိနိုင်ပြီးသူတို့အထက်တန်းလွှာတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာသည့်အခါသူတို့၏စစ်တိုက်ထိရောက်မှုကိုအလွန် improved.World time.Everyone ကျော်ပုံစံအပြောင်းအလဲများသမိုင်းပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်လိမ့်မည်နှင့်ဤ wargame အတွက်သမိုင်းအောင်, တစ်ဦးအစွမ်းထက် Army တည်ထောင်!
တိုင်းပြည်မဟာမိတ်အဖွဲ့စနစ်, အတူတူတိုက်ခြင်း, မဟာမိတ်သို့မဟုတ်ရန်သူဖြစ်လိမ့်မည်။
non-အရာရှိတဦးက module တစ်ခုကစားသမားအသုံးပြုပုံအခမဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းများကို!
multiplayer mode ကိုနှစ်ချက်မဟာဗျူဟာမြောက်ရန်ပွဲ Add
အချိန်ပိုမိုစီးရီးပိုပဋိပက္ခစစ်မြေပြင်, ဆက်လက်ခံရဖို့ … ။
သငျသညျ WW2 ၏သမိုင်းအတွက်အကျိုးစီးပွားများရှိပါသလား WW2 စစ်ရေးပရိတ်သတ်တွေသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဤအလှည့်-based wargame Share အတူတကွဒီ wargame play! ဒီနည်းဗျူဟာ sandbox ‘ဂိမ်းခံစားကြည့်ပါနှင့်သင်လေ့ကျင့်ခန်းမဟာဗျူဟာ layout ကိုစွမ်းရည်ကိုကူညီ!
Android အတွက် WW2: မဟာဗျူဟာတပ်မှူး (WW2: Strategy Commander) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ WW2: မဟာဗျူဟာတပ်မှူး (WW2: Strategy Commander) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, WW2: မဟာဗျူဟာတပ်မှူး (WW2: Strategy Commander) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် WW2: မဟာဗျူဟာတပ်မှူး (WW2: Strategy Commander) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ WW2: မဟာဗျူဟာတပ်မှူး (WW2: Strategy Commander) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် WW2: မဟာဗျူဟာတပ်မှူး (WW2: Strategy Commander) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!
Read more: Strategy WW2: Strategy Commander